Dowlada Somaliya iyo Maraykanka Oo kala Saxixiday Heshiis ku kacaya 300 Oo Malyan Oo Dollar.(Sawiro) | Awdalmedia.com
Dowlada Somaliya iyo Maraykanka Oo kala Saxixiday Heshiis ku kacaya 300 Oo Malyan Oo Dollar.(Sawiro)
Dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya, ayaa maanta Heshiis taariikhi ah la gashay Dowladda Mareykanka mudo 30 sano ah kadib.
Heshiiskaan oo ku kacaya ku dhawaan $300 oo milyan oo Dollar, ayaa waxa wax looga qaban doonaa arimaha Caafimaadka, Waxbarasha iyo hormarinta dhaqaalaha Dalka.
Heshiiska oo loogu magacdaray (DOAG) ayaa waxaa Dowladda Soomaaliya u saxiixay Wasiirka Maaliyadda Soomaaliya, Mudane C/raxmaan Ducaalle Beyle iyo Wasiirka Qorsheynta, Maalgashiga iyo xiriirka caalamiga ah, Mudane Jamaal Maxamed Xasan, iyaddoona uu goob joog ka ahaa Ra’iisul wasaaraha Soomaaliya, Mudane Xasan Cali Kheyre.
Dhanka Mareykanka waxaa joogay ku xigeenka USAID ee qaarada Afrika Julie Koenen iyo safiirka Mareykanka Martin Dale.
Waxyaabaha dowladda federaalka laga taageerayo waxaa ka mid ah dowlad wanaagga, maamulka, waxbarashada, kobaca dhaqaalaha iyo howlaha lagu horumarinayo nabadda iyo xasiloonida dalka. Howlaha uu heshiiska dhigayo waxaa la fulinayaa iyada oo ay ka wada shaqeyn-doonaan dowladda federaalka ah.
“Dowladda Mareykanka, waxaa ay aad u taageereysaa dadaallada xukuumadda Soomaaliya ee lagu soo celinayo xasiloonida, dowlad wanaagga, kobaca dhaqaalaha iyo waxbarashada” sidaa waxaa yiri Julie Koenen.
“ Waxaan rumeysanay in heshiiskan uu ka tarjumayo sida ay nooga go’antahay garab istaagista sidii ay Soomaaliya dib ugu soo noqon laheyd iyo in la helo hadaf horumarineed oo fog” sidaasi waxaa yiri Martin Dale isaga oo intaasi raaciyay ” Heshiiskan waxaa ay ka dhigan tahay iskaashi ballaaran oo dhex-mara Mareykanka iyo Soomaaliya, waxaan ballan-qaadeynaa in aan taageerno himilada shacabka Soomaaliyeed ay ku heli lahaayeen horumar”.
Wasiirka qorsheynta ee Soomaaliya Jamaal Maxamed ayaa sheegay in maanta uu goobjoog ka ahaa heshiis ay dalka Mareykanka 300 oo Milyan oo doolar la saxiixdeen, kaas oo loogu talo-galay in wax looga qabto horumarka Soomaaliya.
2011-kii, USAID waxaa ay in ka badan $1.3 billion ku qarash-gareeysay arrimaha banii’aadnimada iyo $328 million o arrimaha horumarka ah.
Heshiiskan ayaa imanaya toddobaad kadib markii ay dowlada Soomaaliya iyo dowlada Qadar ay kala saxixideen heshiis ku kacaya labo boqol oo malyan oo dollar.